Ny andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra, efa hitanao daholo ve? | Omeo fialamboly aho
Amin'izao fotoana izao andian-dahatsoratra amin'ny Internet na fahitalavitra no fototry ny fiainantsika isan'andro. Misy karazany marobe, saingy misy an'io tsy miala amin'ny lamaody mihitsy: tantaram-pitiavana! Izany no antony anolorako a fifantenana manokana miaraka amin'ny andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra.
Ny tantaram-pitiavana dia lohahevitra iray mahaliana ny ankamaroan'ny zava-misy sy tantara foronina. Ny fifandraisana amin'ny fitiavana dia manaitaitra sy tsy azo antoka - sarotra be koa! Ny fampifangaroana ny eritreritra, ny fahatsapana ary ny fihetsika dia mamela tantara tsy manam-petra miaraka amin'ny vokatra isan-karazany, izay ampiasaina hampivelarana ny atiny amin'ny indostrian'ny fialamboly.
Ankafizo ny safidinay tamin'ny andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra tato ho ato.!
1 Firaisana ara-nofo any New York
4 Ny fotoana anelanelan'ny seams
6 Tovovavy tariby
8 Moa ve ity fifantenana andiana tantaram-pitiavana tsara indrindra feno kitsch ity?
Izy io dia andian-tantara amerikana misy naoty avo izay naharitra enin-taona (1998 ka hatramin'ny 2004) miaraka amina vanim-potoana enina. Ny teti-dratsy dia napetraka ao New York City. Mahita vehivavy efatra ho mpilalao fototra izahay: Carrie, Miranda, Charlotte ary Samantha.
Izy io dia naseho taratry ny fomba fiainan'ny vehivavy amin'ny tontolo maoderina ary amin'ny tanàn-dehibe: olana amin'ny fitiavana sy ny asa, ny fifanolanana eo amin'ny samy olona ary ny fifantohana lehibe amin'ny finamanana sy ny firahalahin'ity vondrona mpinamana ity no mandrafitra ny lohahevitra lehibe. Iray amin'ireo andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra any!
Hitantsika isaky ny fizarana traikefa vaovao ho an'ireo mpihetsiketsika izay misy ny mpiara-miasa aminy, ny asany ary ny firaisana ara-nofo maro! Ity andiany ity dia mamaky ny paradigma mikasika ny anjara asan'ny vehivavy tamin'ny lohahevitra voalaza farany.
Amin'ny ankapobeny, ny fizarana tsirairay dia mitarika fandinihana ny fiainana sy ny fifankatiavana ary ny fifandraisan'ny samy olombelona izay mifanindran-dàlana amin'ny hetahetan'ny toetra tsirairay.
Avy amin'ny tantaran'ny "Firaisana ara-nofo any New York" dia sarimihetsika roa no navoaka tamin'ny 2008 sy 2010, misy ny vinavina momba ny ampahatelony fa ny fandraisana anjaran'ny iray amin'ireo mpilalao fototra no resahina.
Afaka mahita ny atin'ny vanim-potoana rehetra amin'ny sehatra nomerika HBO sy Amazon ianao!
Izany dia American fahitalavitra kilasika mpilalao sarimihetsika Hollywood malaza Bruce Willis sy mpilalao sarimihetsika Cybyll Shepperd ankehitriny.
Notantaraina ny a masoivoho mpitsongo voaforon'ny maodely taloha antsoina hoe Maddie Heyes sy David Addison. Isaky ny fizarana tsirairay dia tranga maromaro no hita fa voavaha miaraka amin'ny ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny roa tonta dia mihalehibe.
Naharitra efa-taona izy io: teo anelanelan'ny taona 1985 ka hatramin'ny 1989. Hitanao ao amin'ny Amazon Prime ity andiany ity.
Noforonin'i Amy Sherman-Palladino, andiany iray izay misy tantaram-pitiavana, tantara an-tsehatra ary hatsikana. Misy renim-pianakaviana tokan-tena sy ny zanany vavy vao herotrerony, izay, toy ny mpinamana akaiky ihany. Naharitra fito taona izany tamin'ny première premiere isan-taona.
Ny tantara dia mitantara ny fiainan'i Lorelai, izay niteraka an'i Rory nandritra ny fahazazany ary avy amin'ny fianakaviana manankarena. Mikomy amin'ireo ray aman-dreniny mifehy izy ary manapa-kevitra ny hiala ao an-trano amin'ny fahazazany mba hitaiza irery ny zanany vavy. Miaraka amin'ny ezaka be dia be izy, mahavita trano fandraisam-bahiny kely tantaniny ary toerana anaovan'ny namany roa akaiky.
Ny andiany dia manomboka taona maro taty aoriana, rehefa nitodika tany amin'ny ray aman-dreniny izy mba hanohana ny zafikeliny amin'ny fianarany. Ny fianakaviana dia tafangona indray ary ny zazavavy Gilmore dia manao sakafo hariva isan-kerinandro ao an-tranon'ny raiben'izy ireo.
Etsy ankilany, Rory dia zatovo fakan-tahaka: tompon'andraikitra izy, tsara tarehy, be fitiavana, manan-tsaina ary manana olon-tiana voalohany tonga lafatra. Mandritra ny vanim-potoana voalohany dia hitantsika ny fomba ianarany hiatrehana ny olan'ny sekoly, ny tsy fitoviana ara-tsosialy ary ny raharaha ara-pitiavana izay manasarotra azy isan'andro. Mampiseho ny fitomboany manokana izany mandra-pivoakany tamin'ny oniversite ary lasa mpanao gazety izy.
Samy mandalo mpivady samy hafa ny mpitolona roa tonta mandritra ny vanim-potoana samihafa mandra-pahitany ny tena fitiavany. Ity andiany ity dia manome lesona antsika momba ny lanjan'ny fianakaviana, ny fisakaizana ary ny maha-zava-dehibe ny firaisana tsikombakomba amin'ny fifandraisana.
Tamin'ny taona 2016, nanapa-kevitra ny hanafaka andian-dahatsoratra mini miaraka amin'ireo tarehin-tsoratra miverina rehetra i Netflix: "Ny vanim-potoana efatra an'ny zazavavy Gilmore". Ny tohiny dia manavao antsika amin'ny fiainan'i Lorelai sy Rory, ary koa ireo olona manodidina azy ireo.
Nahita fiovana be dia be izahay ary gaga tsy nampoizina tamin'ny farany! Ny vinavinany momba ny tohiny dia eny amin'ny rivotra ...
Ny fotoana anelanelan'ny seams
Izy io dia fampifanarahana ny tantara ara-tantara nisy fiaviana Espaniôla, naseho tamin'ny efijery tamin'ny 2013 tamin'ny endrika andian-tsarimihetsika misy toko 17. Ny mpilalao voalohany dia Sira Quiroga, vehivavy nolalaovan'ny mpilalao sarimihetsika Adriana Ugarte.
Sira, tanora mpanao akanjo izy ambany fiaviana avy amin'ny tanànan'i Madrid. Nihalehibe izy niasa ho mpanjaitra tao amin'ny atrikasa sakaizan'ny reniny tena akaiky, izay nampianatra azy ny fahaizana mifehy lamba sy fanjaitra.
Miala amin'ny fofombadiny izy hiaraka amin'i Ramiro, tovolahy tsara tarehy vao nifanena taminy ary tena raiki-pitia aminy. Mipetraka any Tangier, Maroc izy ireo ary manomboka miaina andro nofinofy feno rendrarendra, fety ary fotoana mahafinaritra.
Tsy nampoizina i Ramiro nandao ny tanàna taorian'ny fanenjehana azy noho ny fisolokiana, heloka iray izay iampangana an'i Sira ihany koa, amin'ny alàlan'ny fikambanana. Nahazo fifanarahana hialana amin'ny olana izy ary voatery nifindra tany Tetouan. Mipoaka tampoka ny ady an-trano Espaniola izay atahorana ny reniny.
Noho ny maha izy azy diso dia nanangana atrikasa fanjairana tao amin'io tanàna io izy ary lasa iray amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ny fiarahamonina avo. Nandritra izany fotoana izany dia nifanena tamina mpanao gazety tsara tarehy izy izay raiki-pitia ary nisaraka noho ny antony tsy voafehiny izy ireo.
Fotoana kely aorian'izay dia manao a manolotena hiverina any Madrid ary ho lasa mpitsikilon'ny governemanta miafina. Manangana atrikasa fanjairana hahasarika ny kilasy ambony. Izy dia mifandraika amin'ny tompon'andraikitra ambony alemanina ary amin'ny Mazava ho azy fa mihaona amin'ny fitiavany taloha izay manana tsiambaratelo maro hafenina ihany koa izy.
Feno tantaram-pitiavana sy tsiambaratelo ny atiny. Azo alaina ao amin'ny Netflix izany.
Tantara tsy azonao adino io!
Andian-tantara Amerikana Avaratra miaraka amina vanim-potoana 9 izay nanomboka ny taona 2005 ka hatramin'ny 2014. Ity tantara ity dia mitantara ny fomba nihaonan'i Ted Mosby ny vadiny sy ny renin'ny zanany.
Ny tantara dia notantarain'ny ilay mahery fo monina any New York ary manazava amin'ny zanany ny fomba nahitany tena fitiavana tamin'ny fahatanorany. Ny fizarana tsirairay dia tantara an-tsehatra, traikefa nahafinaritra ary tantaram-pitiavana.
Ted dia manana vondrona namana akaiky indrindra: Marshall, Lilly, Robin ary Barney. Mitantara ny tantarany manokana izy ireo mandritra ilay andian-tantara mba hahaliana azy bebe kokoa. Ny olana mahazatra ny fifandraisana amin'ny fitiavana sy ny fisakaizana dia mipoitra amin'ny fahatanorana.
Izy io no andiany Espaniôla voalohany izay manana anaram-boninahitra Netflix irery. Izy io dia premiered tamina fahombiazana lehibe tamin'ny 2017 ary fizarana roa no navoaka nandritra iny taona iny ihany. Ny premieres ny fitohizan'ny 7 septambra 2018. Ny mpilalao voalohany dia ilay mpilalao sarimihetsika Espaniola Blanca Suarez.
Ny tantara tantaram-pitiavana dia napetraka tamin'ny taona 20 ary nitantara ny tantaran'ny vehivavy efatra izay miasa ao amin'ny orinasa fifandraisan-davitra lehibe indrindra any Madrid manao ny asan'ny mpandraharaha telefaona.
Lidia no mpilalao fototra izay mitondra tsiambaratelo maro tamin'ny lasany tany am-paosiny ary sendra nihaona tamin'ny fitiavany adolantsento tao amin'ilay orinasa niasàny izao, etsy ankilany ny tompon'ny orinasa dia faly amin'ny hatsaran-tarehy sy faharanitan-tsaina. ny telozoro fitiavana feno tsy fifanarahana sy fotoana mahaliana.
Etsy ankilany isika dia manana an'i Ángeles, Carlota ary Marga izay manana fifandraisana akaiky amin'i Lidia. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny toetrany sy ny fomba fiainany. SYMahita ady hevitra be dia be isika ao anatin'ilay tetika satria misy olana izay nandrava ny paradigma tamin'izany fotoana izany, toy ny tranga ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy sy ny fisaraham-panambadiana.
Ity tantara ity dia iray amin'ireo ankafizinay indrindra amin'ny lisitr'ireo andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra!
Famokarana tany am-boalohany Netflix izay nidina voalohany tamin'ny 2016 ary manana vanim-potoana roa hatreto amin'ny sehatra.
Izany dia tantara iraisan'ny mpivady izay mora fantarina. Manana simia lehibe izy ireo ary na dia tsy izy ireo aza ny mpivady lavorary nofaritan'ny fiarahamonina, dia mahita fivoarana mahaliana eo amin'ny mpivady mandrafitra an'i Mickey sy Gus izahay.
Ity andiany ity dia manome lesona amin'ny fiainana ho mpivady ny maha-zava-dehibe ny maha-izy azy sy ny firaisana tsikombakomba, ary koa ny filàna fandanjana eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny fitiavana. Manana endrika maro ny mahery fo ary ho tianao ny hahita ny fomba hamahan'ireo mpivady ny olany amin'ny fomba samihafa ary hampiharihary ny fomba fijery tsy mitovy amin'ny vondrona namana manodidina azy ireo.
Moa ve ity fifantenana andiana tantaram-pitiavana tsara indrindra feno kitsch ity?
Tandremo fa tsy misy antony tokony hanaitra! Tsy misy anaram-boninahitra atolotra anao dia tantely madio, ny fifantenana dia mifototra amin'ny fitambarana fitiavana miaraka amin'ny anton-javatra hafa: manana hatsikana, tantara an-tsehatra, hetsika, lamaody, zava-miafina, fitsikilovana ary singa hafa isika izany dia hahatonga anao hankafy ny andiany tsirairay.
Ny andian-tantaram-pitiavana dia maneho ny fitsaboana satria mora levona izy ireo, amin'izay afaka miala sasatra ianao rehefa mianatra zavatra vaovao na roa momba ny fitiavana sy ny fiainana amin'ny ankapobeny. Raha ny anao no karazana tantaram-pitiavana, tokony ho hitanao ireo andiany rehetra atolotra amin'ity lahatsoratra ity!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Ny andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra